ဆေးဝါး intermediate, အော်ဂဲနစ် Intermediate - Huanhao
ဖောက်သည် & ပြပွဲများ
ဓာတု & ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကိုအဖြစ်များသည့်အမည် Lidocaine CAS နံပါတ် 137-58-6 သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% မော်လီကျူးအလေးချိန် 234,337 Density 1.0 ± 0.1 g / cm3 ပြုတ်ပွိုင့် 372,7 ± 52,0 ° 760 mmHg Molecular ဖော်မြူလာ C14H22N2O မှာကို C ပွိုင့် 66-69 အရည်ပျော်° C မှ Flash ကိုပွိုင့် 179,2 ± 30,7 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အိတ်သတ္တုပါး 1kg / လူမီနီယမ်ထုပ်ပိုး, အတွင်းနှစ်ဆပလပ်စတစ်အိတ် 25kg / Fiber စည်, အထူးလိုင်းအားဖြင့် DHL / FedEx / UPS / EMS 2. သင်္ဘောများကလမ်း 1. သင်္ဘောသင်္ဘောတင်အတွင်းစိတ်ကို double ပလပ်စတစ်အိတ်သင်ရှင်းလင်းရေးသည့်အခါလုပ်မပေးနိုင်လျှင် ကုန်ပစ္စည်းများလေကြောင်း / se အားဖြင့်သင့်အကောက်ခွန် 3. သင်္ဘောရောက်ရှိ ...
phenacetin ကြည်လင်မှုန့်ကိုအကောင်းဆုံးတွေနဲ့ 62-44-2 CAS ...
phenacetin ၏အသုံးပြုမှု: Phenacetin, Anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများမပါဘဲ non-opioid analgesic ဖြစ်ပါတယ် Cox-3 activity.Target ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်: COXPhenacetin တစ်နာကျင်မှု-သက်သာရာဖြစ်ပြီးအဖျား-လျှော့ချမူးယစ်ဆေး, Phenacetin ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှဇွန်လ 1973 ခုနှစ်တွင်ကနေဒါစျေးကွက်အတွင်းမှဆုတ်ခွာခဲ့သည် nephropathy နှင့်စပ်လျဉ်း။ အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတွင်မကြာသေးမီကဥရောပနှင့်သြစတြေးလျမှာဖော်ပြထားတဲ့နှင့်အဖြစ်လက်တွေ့နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းဒေတာ "phenacetin nephritis" နဲ့သဟဇာတရှိကြ၏။ ဤအစီရင်ခံစာထဲတွင်တွေ့ရှိချက်တန်ဖိုး ...
4-အမိုင်နို-3,5-dichloroacetophenone CAS 37148-48-4
10 သန်းယွမ်၏မြို့တော်မှတ်ပုံတင်တဲ့သူ Hebei Huanhao ဇီဝနည်းပညာ Co. , Ltd မှ, နီးပါး $2သန်းမှကျနော်တို့ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းတစ်ခုဆေးဝါးကုန်ကြမ်းစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဓါတ်ကူပစ္စည်း R & D စင်တာရှိသည်, ကျနော်တို့ဓါတ်ကူပစ္စည်းသောင်းချီ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးထုတ်လုပ်မှုပြုပါ မျိုးစိတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်သန်မှုများအတွက်အရည်အသွေးကျက်စားဖြစ်ပါတယ်။ အကြွေးဂုဏ်သတင်းတို့ကဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှာကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဥရောပတောင်အမေရိကအတွက်ကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းအားသာချက်ရှိသည်နှင့်ဒါညြအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလည်းရှိပါတယ် ...
Acetate Trihydrate ဦးဆောင်လမ်းပြ
အော်ဂဲနစ် intermediate 100-07-2
မည်သည့် doping မရှိရင်အားလုံးထုတ်ကုန်စင်ကြယ်သောဖြစ်ကြသည်။
လျှော့စျေး !!! ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မကြာသေးမီကလျှော့စျေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏တချို့က Alibaba ပလက်ဖောင်းပေါ်နှစ်ဆ 11 လှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်, နှင့်အချို့သောထုတ်ကုန်ဈေးလျှော့ရပါလိမ့်မယ်။ https: ငါတို့သည်သင်တို့၏ participation.The လှုပ်ရှားမှု entry ကိုမျှော်လင့် // huanha ...
ကျနော်တို့ရှန်ဟိုင်းမှာဇွန်လ 22-24, 2020 ရက်တွင် 20th ကမ္ဘာကြီးဆေးဝါးကုန်ကြမ်းတရုတ်ပြပွဲမှတက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ပြသခဲ့သည်က NAME: Hebei huanhao ဇီဝနည်းပညာတွဲဖက်။ , LTD Booth မျှ။ : E9D96 လိပ်စာ: Shang ...
နေရပ်လိပ်စာ: အဆိုပါ MixC, qiaoxi ခရိုင်, shijiazhuang မြို့, hebei ပြည်နယ်, တရုတ်
မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်: 0086- (0) 311-83975816
E-mail ကို: grace@hbhuanhao.com
E-mail ကို: grace123@hbhuanhao.com
Terbinafine Hcl , Terbinafine Hydrochloride ,5- Terbinafine Hcl , ပိုတက်ဆီယမ်သည် T-Butoxide , Terbinafine Hcl Powder , Terbinafine Powder ,